မိမိပွုတဲ့ ကုသိုလျတှေ Fb..ပျေါ တငျသငျ့ပါသလား? ဖတျကွညျ့နျော – Nyi Ma Lay
Fb ပျေါ မှတျတမျးအဖွဈ တငျသငျ့ပါတယျလို့ပဲ ဖွခေငျြပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဟိုး ယခငျကဆို ကုသိုလျပွုပွီးတိုငျး ကွေးစညျတီးကွပါတယျ။ ကွေးစညျသံကို ကွားရရငျ အိမျနီးနားခငျြးတှကေ အမြှပေးဝတောပဲဆိုတာ သိရှိပွီး သာဓုချေါကွတယျ။
ယခုခတျေမှာတော့ မိမိကုသိုလျပွုပွီးတိုငျး Fbပျေါ တငျကွတာဟာ… မိမိကုသိုလကြို အမြှပေးဝကွေခွငျးပါပဲ။ သာဓုချေါလိုကျပါ။ မိမိလဲ ကုသိုလျရပါတယျ။
ကွှားဝါတာပါဆိုပွီး နှလုံးသှငျး မမှားပါစနေဲ့။ သူတဈပါး ကုသိုလျက သငျ့အတှကျ အကုသိုလျဖွဈသှားနိုငျလို့ပါ။ ( မိမိရဲ့ ကုသိုလျတှကေို facebook ပျေါတငျရခွငျးရဲ့ အကြိုးကတော့ )
၁။ မလှူခငျက စိတျထဲကွံစညျဖွဈနတေဲ့ ပုဗ်ဗ စတေနာ၊
၂။လှူနဆေဲ အခိုကျအတနျ့မှာ ကွညျနူးနမေိတဲ့ မုဉ်စ စတေနာ၊
၃။ လှူပွီး မိမိကုသိုလျကို ပွနျလညျအောကျမတေဲ့ အပရ စတေနာဆိုပွီးစတေနာသုံးတနျရှိတဲ့အထဲကfbပျေါ တငျထားတာကို ခဏခဏ ပွနျကွညျ့လို့လဲ ရတယျ။
fbကလဲ တဈနှဈပွညျ့ရငျပွနျပျေါလာတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ မိမိပွုခဲ့တဲ့ကုသိုလျကို လူတိုငျးက သတိရကွမှာပါပဲ။အဲဒီလို ပွနျသတိရခွငျးဟာ အပရ စတေနာကိုပိုပွီး အားကောငျးစပေါတယျ🙏 🙏ဒါနထကျ သီလက မွတျတယျ။ 🙏သီလထကျ ဘာဝနာက မွတျတယျဆိုတာ လူတိုငျး သိကွပွီးသားပါပဲ။
အနုဿတိ( ၁ဝ )ပါးထဲမှာ စာဂါ နုဿတိဘာဝနာ( မိမိပွုခဲ့ဘူးတဲ့ ကုသိုလျကို ပွနျလညျအောကျမခွေ့ငျး ဘာဝနာပေါ့) သခြောပွနျကွညျ့လိုကျပါ။ လှူခဲ့စဉျက ရိုးရိုးဒါန အဆငျ့ပဲနျော။
အပရ စတေနာ မိမိပွုခဲ့တဲ့ကုသိုလျကို ပွနျအမှတျရတာက စာဂါ နုဿတိဘာဝနာ ဆိုတော့ ဘာဝနာအဆငျ့ထိ ရောကျသှားတယျ။ ပိုပွီး အကြိုးကွီးတယျပေါ့။
ပွီးတော့ နစေ့ဉျပုံမှနျပွုလုပျကွ ကုသိုလျကို အာစိဏ်ဏကံ ကုသိုလျလို့ ချေါတယျ။ တဈကွိမျတဈခါပဲ ပွုခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလျကို အကွိမျကွိမျ အခါခါ ပွနျသတိရနပေါကလညျး အာစိဏ်ဏကံ ကုသိုလျဖွဈသှားတာပါပဲ။ ဒါနကနေ ဘာဝနာအဆငျ့ တဈခါပဲပွုခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလျကနေ နစေ့ဉျပွုလုပျရာရောကျတဲ့ အာစိဏ်ဏကံ ကုသိုလျအဆငျ့ ဖွဈတယျဆိုတာ အပရ စတေနာကွောငျ့ ဖွဈတာပါပဲ။
ဓာတျပုံမှတျတမျး fbမှာ ကုသိုလျမှတျတမျးတှဟော အပရစတေနာကို ဖွဈစနေိုငျတာမို့ fb ပျေါတငျနတေဲ့ ကုသိုလျမွငျကှငျးတှေ၊ သာဓုချေါလိုကျပါ။ ကိုယျလဲ ကုသိုလျရတာပေါ့။၊
ကွှားဝါနတေယျလို့ မမွငျဘဲ သူတို့အခုလို ကုသိုလျပွုနိုငျတာတှဟော ရှေးဘဝကကုသိုလျကံတှေ ကောငျးခဲ့လို့ပါ ဆိုပွီး လူတဈယောကျအပျေါ ခဈြခွငျး မုနျးခွငျးကို ဖယျပွီး (ကံ ကံ၏အကြိုးပေးတာကို ဆငျခွငျလိုကျတော့ ) ယောနိသော မနသိကာရ ဖွဈသှားတာမို့ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝလေးလဲ ဖွောငျ့တနျးသှားတာပေါ့။
🙏ဒါကွောငျ့ ကုသိုလျတှကေို နစေ့ဉျ ရအောငျယူကွပါစို့ Photo #Credit ရှငျလနျး ခမျြးမွပေ့ါစေ မတ်ေတာဖွငျ့ ရှလေေးဝ ဆရာတျော-
မိမိပြုတဲ့ ကုသိုလ်တွေ Fb..ပေါ် တင်သင့်ပါသလား? ဖတ်ကြည့်နော်
Fb ပေါ် မှတ်တမ်းအဖြစ် တင်သင့်ပါတယ်လို့ပဲ ဖြေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုး ယခင်ကဆို ကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီးကြပါတယ်။ ကြေးစည်သံကို ကြားရရင် အိမ်နီးနားချင်းတွေက အမျှပေးဝေတာပဲဆိုတာ သိရှိပြီး သာဓုခေါ်ကြတယ်။
ယခုခေတ်မှာတော့ မိမိကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း Fbပေါ် တင်ကြတာဟာ… မိမိကုသိုလျကို အမျှပေးဝေကြခြင်းပါပဲ။ သာဓုခေါ်လိုက်ပါ။ မိမိလဲ ကုသိုလ်ရပါတယ်။
ကြွားဝါတာပါဆိုပြီး နှလုံးသွင်း မမှားပါစေနဲ့။ သူတစ်ပါး ကုသိုလ်က သင့်အတွက် အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။ ( မိမိရဲ့ ကုသိုလ်တွေကို facebook ပေါ်တင်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးကတော့ )
၁။ မလှူခင်က စိတ်ထဲကြံစည်ဖြစ်နေတဲ့ ပုဗ္ဗ စေတနာ၊
၂။လှူနေဆဲ အခိုက်အတန့်မှာ ကြည်နူးနေမိတဲ့ မုဉ္စ စေတနာ၊
၃။ လှူပြီး မိမိကုသိုလ်ကို ပြန်လည်အောက်မေ့တဲ့ အပရ စေတနာဆိုပြီးစေတနာသုံးတန်ရှိတဲ့အထဲကfbပေါ် တင်ထားတာကို ခဏခဏ ပြန်ကြည့်လို့လဲ ရတယ်။
fbကလဲ တစ်နှစ်ပြည့်ရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကို လူတိုင်းက သတိရကြမှာပါပဲ။အဲဒီလို ပြန်သတိရခြင်းဟာ အပရ စေတနာကိုပိုပြီး အားကောင်းစေပါတယ်🙏 🙏ဒါနထက် သီလက မြတ်တယ်။ 🙏သီလထက် ဘာဝနာက မြတ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပြီးသားပါပဲ။
အနုဿတိ( ၁ဝ )ပါးထဲမှာ စာဂါ နုဿတိဘာဝနာ( မိမိပြုခဲ့ဘူးတဲ့ ကုသိုလ်ကို ပြန်လည်အောက်မေ့ခြင်း ဘာဝနာပေါ့) သေချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ လှူခဲ့စဉ်က ရိုးရိုးဒါန အဆင့်ပဲနော်။
အပရ စေတနာ မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကို ပြန်အမှတ်ရတာက စာဂါ နုဿတိဘာဝနာ ဆိုတော့ ဘာဝနာအဆင့်ထိ ရောက်သွားတယ်။ ပိုပြီး အကျိုးကြီးတယ်ပေါ့။
ပြီးတော့ နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ကြ ကုသိုလ်ကို အာစိဏ္ဏကံ ကုသိုလ်လို့ ခေါ်တယ်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ကို အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပြန်သတိရနေပါကလည်း အာစိဏ္ဏကံ ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဒါနကနေ ဘာဝနာအဆင့် တစ်ခါပဲပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ကနေ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရာရောက်တဲ့ အာစိဏ္ဏကံ ကုသိုလ်အဆင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အပရ စေတနာကြောင့် ဖြစ်တာပါပဲ။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း fbမှာ ကုသိုလ်မှတ်တမ်းတွေဟာ အပရစေတနာကို ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ fb ပေါ်တင်နေတဲ့ ကုသိုလ်မြင်ကွင်းတွေ၊ သာဓုခေါ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်လဲ ကုသိုလ်ရတာပေါ့။၊
ကြွားဝါနေတယ်လို့ မမြင်ဘဲ သူတို့အခုလို ကုသိုလ်ပြုနိုင်တာတွေဟာ ရှေးဘဝကကုသိုလ်ကံတွေ ကောင်းခဲ့လို့ပါ ဆိုပြီး လူတစ်ယောက်အပေါ် ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းကို ဖယ်ပြီး (ကံ ကံ၏အကျိုးပေးတာကို ဆင်ခြင်လိုက်တော့ ) ယောနိသော မနသိကာရ ဖြစ်သွားတာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလေးလဲ ဖြောင့်တန်းသွားတာပေါ့။
🙏ဒါကြောင့် ကုသိုလ်တွေကို နေ့စဉ် ရအောင်ယူကြပါစို့ Photo #Credit ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေ မေတ္တာဖြင့် ရွှေလေးဝ ဆရာတော်-
Previous post ကမ်ဘာ့အညဈညမျးဆုံး မွဈ ၁၀ စငျး စာရငျးမှာ ပါဝငျလာတဲ့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးက အကွီးဆုံးမွဈ
Next post ကားမောငျးနရေငျး ရုတျတရကျ ကားတာယာ ပှငျ့ပွီး ဘီးပေါကျလြှငျ ဆောငျရှကျရမညျ့ အခကျြ (၆)ခကျြ